सेलिब्रेटी डा.सन्तोष खुल्ला राजनीतिमा प्रवेश ‘डाक्टर पेशा हो, राजनीति सेवा’
नेपाली कांग्रेस १४ औँ महाधिवेशनमा खुल्लातर्फका महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेदवार
सोमवार, मंसिर ६, २०७८ मा प्रकाशित
यतिबेला चिकित्सकलाई चुनाव लागेको छ । अधिकांश चिकित्सकलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चुनाव लागेपनि सेलिब्रेटी चिकित्सक डा. सन्तोष उपाध्याय भने पार्टीको राजनीतिमा व्यस्त हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य सेवामा सक्रिय डा उपाध्याय नेपाल कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ ।
२०१९ मा मिस्टर नेपाल, २०२० मा मिस्टर सुपरस्टार साथै २०२१ मा सुपइन्टरनेश्नलमा थर्ड रनरअप हुनुभएका डा उपाध्यायले अछामको क्षेत्र न २ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । डा उपाध्यायले चुनौतीपूर्ण राजनीतिलाई दोष देखाएर मात्रै परिवर्तन ल्याउन नसकिने देखेरै राजनीतिमा लागेको बताउनु हुन्छ ।
डा उपाध्याय भन्नुहुन्छ, आफ्नो गाउँ, जिल्ला राम्रो बनायो भने मात्रै देश राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा आफू स्पष्ट भएकाले गाउँबाट राजनीति सुरु गरेको हुँ । समाजवादको सिद्धान्तनै नेपाली समाजका लागि योग्य सिद्धान्त भएकाले आफू नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट राजनीति गर्न लागेको हुँ, नेपालमा पार्टीको नाममा मात्रै फरक हुन्, सार सबैको उद्देश्य र वास्तविकतामा त्यति फरक छैन । समाज सुधारका लागि कुन पार्टी भन्नेले त्यति फरक पार्दैन ।
म जहाँ हुर्किएपनि मेरो धरातल अछाम नै हो । एमबिबिएसको अध्ययन सकिएपछि मैले सेवा सुरु गरेको नै अछामको कमलबजार स्थित स्वास्थ्य केन्द्रबाट हो । यहाँको आवश्यकता हेरेर २ विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना, गाउँ ठाँउमा शिविर संचालन, जिल्ला अस्पताललाई फोटोथेरापी मेसिन उपलब्ध गराउने काम देखि कोरोनाको बेला अक्सिजन कन्सन्टेटर उपलब्ध गराउने जस्ता काम गरेको थिए । यसरी काम गर्दा त्यहाँ काम गर्दा समाजको स्वास्थ्य अवस्था मात्रै होइन, राजनीतिक अवस्था पनि बुझ्ने अवसर पाइयो । यहाँ भेटिएका हरेक मानिस राजनीतिक खेलबाट कतै न कतै प्रभावित छन्, उनीहरूले भोगिरहेका सामाजिक समस्याहरूका कारण कतै न कतै राजनीति पनि हो । तर सामान्य नागरिकलाई राज्य भएको अनुभुति गराउने त राजनीतिले नै हो तर यहाँ त्यस्तै भैरहेको छैन । यि कुराहरूले आफूलाई चिकित्सा पेशामा मात्रै सीमित राखेर समाधान हुने वा सहयोग पुग्ने देखिएन ।
हामीले राजनीतिलाई सधैँ सीमित व्यक्तिको जिम्मा लगाएर छोडियो भने राजनीतिमा पनि सुधार आउँदैन । त्यसैले उमेरमा नै राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुँ ।
राजनीति आजको भोलि परिवर्तन हुने कुरा होइन, यसले आफ्नो गति अवश्य लिन्छ तर त्यसका लागि पृष्ठभूमि दरो बनाउनु पर्छ । पृष्ठभूमि भनेको नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार, आधारभुत सेवाहरूको पुर्ण प्रत्याभूति नै हो । अछामबाट राजनीति सुरु गर्नुको अर्को कारण यहाँ भूगोल र परिवेश मैले बुझेको छु । त्यसैले यहाँ नागरिकको जीवन स्तर सुधार गर्नका लागि नयाँ पुस्ताको राजनीति आवश्यक छ ।
चिकित्सा आफ्नो मुख्य पेशा हो, राजनीति सेवा हो । पेशाबाट मैले धेरैलाई स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छु, त्यसबाहेक राजनीतिबाट सामाजिक चेत मात्रै होइन, नीर्णायक तहमै पुगेर नीतिगत सुधार गर्नु छ ।
राजनीति मेरा लागि नयाँ हो, पार्टीको निर्वाचन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सिक्दै छु । महाधिवेशनमा आउने चुनौती र चुनावी नतिजालाई स्विकार गरेर अघि बढ्ने बताउने डा उपाध्यायको अठोट छ ।
ओमिक्रन भेरियन्ट कस्तो प्रकारको भेरियन्ट हो ? यसबाट बच्न किन बुस्टर डोजको आवश्यकता पर्दछ ?